Misy Zavatra Manokana Momba ny SEO ho an'ny Fiantrana? Manana fanamafisam-peo an-tserasera ve ianao?
Ny fikarohana fikarohana (na SEO) dia miely be dia be amin'ny fampitomboana ny: ny kalitao sy ny habetsaky ny fifamoivoizana amin'ny tranokala amin'ny alàlan'ny valin'ny fikarohana biolojika. Raha tsorina, SEO dia mikasika ny fampahafantarana ny loharanon-kevitra ho an'ny mpanatrika.
SEO dia azo ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny orinasa izay manana vokatra na serivisy entina hanolorana - angamba, misy olona mivezivezy mikaroka azy - laptop computers leasing. Miaraka amin'ny tetikady SEO mahomby, ny fahatsinjovana dia afaka mikaroka fepetra mifanentana amin'ny Google izay manosika azy ireo amin'ny raharaham-barotra. Na dia marina aza fa saika ny orinasa rehetra dia afaka mahazo tombony avy amin'ny SEO, ireo manam-pahaizana Semalt dia nahita fa ny indostria sasany, anisan'izany ireo asa soa, dia afaka mahazo tombontsoa amin'ny fanatsarana ny môtô mihoatra ny hafa.
Araka ny voalaza tetsy aloha, ny tanjona voalohan'ny SEO dia ny hahatonga ny loharanon-kevitra hita amin'ny olona te-hahita anao. Ho an'ireo olona izay mihazakazaka fiantrana dia midika izany fa hahatratra olona liana amin'ny fanohanana ny antony mitovy aminao, ary vonona ny hanao fanomezana ho fanohanana ny asanao.
Na dia tsy misy zavatra manokana momba ny SEO ho an'ny asa soa dia aza mifikitra amin'ny toro-hevitra SEO voasoratra eto ambany. Hanampy anao hahatakatra bebe kokoa ny antony iheveran'ny SEO ho an'ny indostria toy izany ary manazava hoe aiza no hanomboka amin'ny famoronana seho SEO ho an'ny fiantrana anao.
Fanangonam-bola: Fanomezana an-tserasera
Fananganana vola: Fanomezana an-tserasera fomba haingana sy mora handraisana anjara. SEO no fomba tsara indrindra ahafahan'ny olona mamily ny mpitsidika mivantana na tsy mivantana amin'ny pejiny fanomezana an-tserasera.
Fampitomboana ny fahatsiarovan-tena: Ny tranonkalan'ny fiantrana dia ny fahafahana tonga lafatra afaka manaparitaka ny teny momba ny fandaminana, manome ny olona fahafahana hahita ny tenany momba ny zavatra rehetra.
Mitokia ny fahatokisana sy ny tsy fivadihana: Ny tetik'ady SEO iray efa nampiharina dia manampy amin'ny fananganana laza tsara kokoa. Toy izao manaraka izao: raha mora ny mahita ny Internet, ny olona dia matoky kokoa ny zavatra ataonao.
Miantsaino ny tenimiafina
Tokony hifantina tsara ny teny fanalahidy tianao. Mifidiana ireo izay mamaritra akaiky ny votoatiny. Eritrereto ny hoavinao, inona no mety hikaroka hahitanao ny fiantranao. Andramo ny mifidy ireo olona tsy hay hadinoina, mba hahalalan'ny olona bebe kokoa ny fikambanana Google anao ary hilaza amin'ny hafa momba azy io.
Ny toerana misy ny toerana misy azy
Mametraha ny toerana misy ny fiantrana. Avelao ny olona hahalala hoe aiza no misy anao. Tadidio fa ny toerana dia tena zava-dehibe. Amin'ny voalohany, aza mandany fotoana miezaka manandratra amina toerana ivelanao. Ny fifantohana amin'ny ezaka amin'ny SEO eo an-toerana dia mety hahasoa kokoa.
Mahaiza Manokana sy Mahasoa
Ny votoatiny tokony ho laharam-pahamehana. Adikao am-pahamendrehana fa mameno ny tranokalanao miaraka amin'ny votoatin-javatra vaovao, mahasoa ary mahaliana. Ataovy ao an-tsaina ny valisoa sy ny karoka hafa karazana karazan-karoka fitadiavana amin'ny votoaty sarobidy amin'ny fanamafisana ny laharam-pametrahany mifototra amin'ireo tranga toy ny:
fotoana lavina amin'ny toerana;
Ny fitrandrahana ny tranonkala;
Rohy ivelany amin'ny tranonkala.
Tandremo ihany koa fa ny tranonkala fifanekem-pihavanana dia maimaim-poana sy tsy misy fahadisoana noho ny fanandraman'ny mpampiasa.
Mandeha ho an'ny fiantrana SEO
Manantena anao fa nahafinaritra ity torolalana fikarohana torolalana fanandramana ity. Mariho fa soso-kevitra vitsivitsy fotsiny ireny mba hahazoana ny SEO mametraka anao nefa tsy mandany fotoana sy vola be loatra. Manomboka mamorona ny charity SEO anao amin'izao fotoana izao ary hijery izay mitranga amin'ny laharana misy anao ao anatin'ny iray volana!